Shiinaha 2D warshad calaamadda pin iyo soo saarayaasha | Kingtai
Kuwani calaamadaha naxaasta shaabadaysan waxaa ka buuxa Imitation Enamell, Kuwani biinanka caadada caadadii waa dhalaalaya midab leh oo tayo wanaagsan leh, faahfaahinta biraha kiciyey iyo recessed,. Farsamaynta farshaxanku waxay yeelan doontaa khad bir ah, kaas oo leh qaab adag oo adag oo bir ah.
Pin 2D lapel pin waa mid aad u badan oo loo isticmaali karo munaasabado kala duwan! U isticmaal iyaga bixinta, abaalmarinta abaalmarinta, kor u qaadista iyo Ku habboonaanta dhiirrigelinta ganacsi ee tayada sare leh, naadiyada iyo ururada, calaamadahaani waxay muujinayaan farsamo tayo sare leh. wax kasta oo u dhexeeya.
2D Lapel Pins talaabada ugu horeysa ee biinanka lagu dhuftay biinanka
Qaab-dhismeedka dhinta caadada ayaa laga soosaaray farshaxankaaga la oggolaaday
iyo qaabka loo dhinto ayaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo farshaxankaaga xaashi bir ama naxaas ah
Isla markiiba ka dib, qaabkaaga naqshadeynta ayaa loo jaray shaxanka saxda ah, tallaabada koowaad ee dhammaatay.
Tallaabada xigta waa la safeeyey gacanta, meelaha sare ee birta ah ee kor loo qaaday ayaa lagu safeeyey muraayad dhammaad ah, Ka dib tallaabada xigta waa geedi socodka dahaadhka, si aad u dahaadho waxaad dooran kartaa midabyo badan oo kala duwan
Nick Nickel (qalin) naxaas ah, iyo nikkel madow (madow madow / chrome madow), In kasta oo aagga gaagaaban ay buuxsameen rinjiga dhaldhalaalka. Amarka yar ayaa loo adeegsan karaa shaqada gacanta, amarka habsiinta waxaa loo isticmaali karaa mashiinka midabka buuxiya otomaatiga.
Waxaan u adeegsanaa midabada Pantone si gaar ah ayaa loogu qasi karaa amar kasta, waxaan damaanad qaadi karnaa heerarkaaga astaanta ah oo si sax ah noo siiya lambarka Pantone.
Naqshadeyntaada caadada ahi waxay ka koobnaan kartaa illaa lix midab waxaana lagu shaabadeyn karaa qaab kasta oo leh xulashooyinka dahab, qalin, naxaas ah ama niikel madow oo dhammaystiran. Tirada ugu yar ee la dalbado waa 100 kumbiyuutar.
Waxaan bixinnaa adeegyo farshaxan oo BILAASH ah oo leh amar kasta! Qalabkayaga naqshadeynta DIY iyo adeegga midabka Pantone u dhigma ayaa hubin doona biinankaagu inay yihiin sida saxda ah ee aad ku talo jirto. Dhammaan cadeymaha dib ayaa loo eegay ilaa aad si buuxda uga qanacsan tahay.
Xiga: Daabac Dijitaal Digital daabac ah